OPPO A5s - 4230mAh Battery, Waterdrop Screen | OPPO Myanmar
တောက်ပထင်ရှားသော မျက်နှာပြင်ဒီဇိုင်းကို ရင်သက်ရှုမောဖွယ်ကောင်းသော ၆.၂ လက်မ ကျယ်
ပြန့်သည့် Corning Gorilla Glass ကို အသုံးပြုထားသည်။ ပိုမိုကျယ်ပြန့်သည် မျက်နှာပြင်ကို အသုံး
ပြုနိုင်ပြီး ဂိမ်းကစားရာတွင် စွဲမက်ဖွယ်ကောင်းအောင် ကစားနိုင်ရန် အထောက်အကူပေးသည်။
စိန်သည် ထာဝရ ဝင်းဝင်းလက်လက်အရောင်တောက်ပသလိုပင် OPPO A5s သည် အနီရောင်၊ အ
နက်ရောင် စသည့် တည်ငြိမ်ခန့်ညားသည့် အရောင် ၂ မျိုးဖြင့် ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။
ပိုမိုကြာရှည်ခံနိုင်သော ဘက်ထရီကြောင့် ဂိမ်းဆော့ကစားရာတွင်ဖြစ်စေ၊ တေးသီချင်း နားဆင်ရာ
တွင်ဖြစ်စေ၊ ရုပ်ရှင်ကြည့်ရှုရာတွင်ဖြစ်စေ အဆုံးစမရှိသော ပျော်ရွှင်ခြင်းများဖြင့် ဖုန်းကို အဆက်မပြတ် အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါသည်။
အသစ်ထပ်မံ အဆင့်မြင့်ထားသော CPU သည် လုပ်ငန်းပေါင်းစုံကို ပိုမိုလုပ်ဆောင်နိုင်ပြီး အဆင်ပြေ
ချောမွေ့စွာ ဂိမ်းဆော့ကစားနိုင်သည်။ လုပ်ငန်းဆောင်တာကြီးများကို လုပ်ဆောင်ရာတွင်လည်း operation ချိန်ကို စိတ်ပူစရာမလိုပဲ ဟန်းခြင်းမရှိ အသုံးပြုနိုင်သည်။
မည်သည့်အချိန်မဆို ဖုန်းမျက်နှာပြင်ကို တို့ထိလိုက်ရုံဖြင့် မြန်ဆန်စွာ လော့ခ်ဖွင့်နိုင်သည်။
မြင်ကွင်းတွင်းမှ ပုံရိပ်တိုင်းကို ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာ မှတ်တမ်းတင်ပေးနိုင်မည့် depth-of-field bokeh effect လုပ်ဆောင်ချက်သည် သင်၏ အလှဓာတ်ပုံတိုင်းကို ပိုမိုသဘာဝကျကျ လှပစေမှာပါ။
ပြည့်စုံကောင်းမွန်သော ဓာတ်ပုံများကို အချိန်မရွေး လွယ်ကူစွာ ဖမ်းယူကြစို့။
သင့်အလှကို ပေါ်လွင်အောင် ဖန်တီးပါ
အဆင့်မြင့်ထားသည့် AI နည်းပညာကို အသုံးပြုထားသဖြင့် သင်၏ အလှတရားကို စီစစ်လေ့လာပြီး တိကျမှန်ကန်စွာ ထိန်ညှိပေးကာ ဆယ်လ်ဖီဓာတ်ပုံတိုင်းကို ပိုမိုသဘာဝကျ လှပစေပါသည်။
ရွေးချယ်စရာများပြားလှသော AR စတစ်ကာဖြင့် တစ်ဦးချင်းစီရဲ့ တီထွင်နိုင်ဖန်တီးနိုင်မှုစွမ်းရည်ကို အစွမ်းပြပြီး သူငယ်ချင်းများနှင့် ပျော်ရွှင်စရာ၊ ကြည်နူးစရာများ ဖန်တီးနိုင်ပါသည်။
Smart Bar တွင် အပလီကေးရှင်း တစ်ခုမှတစ်ခုသို့ လွယ်ကူစွာ ပြောင်းလဲအသုံးပြုနိုင်ပြီး ဂိမ်းဆော့ကစားရင်း၊ ဗွီဒီယိုကြည့်ရင်းနှင့်ပင် ဖိုင်ပို့ခြင်း၊ စာပို့ခြင်းနှင့် screenshot လုပ်ဆောင်ချက်တို့ကို လွယ်ကူစွာ ပြုလုပ်နိုင်ပါပြီ။
4. AR Stickers only applies for 3+32 (RAM+ROM) version.
5. OPPO A5s features2memory options, 2GB RAM + 32GB ROM and 3GB RAM + 32GB ROM.